Wednesday September 23, 2015 - 10:37:43 in Wararka by Super Admin
(Rating 2.9/5 Stars) Total Votes: 13
Weerarradii dhacay Saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ee lagu xasmiyay saldhigyo ay lahaayeen Ciidamada Amisom; sida kii leego iyo Jannaale ayaa mashquuliyay maskaxda wariyeyaasha, qorayaasha iyo Xarumaha Daraasaatka. Qoraaga lagu magacaabo Maxamuud Cabdisamad "Dul-yadeyn” oo ka tirsan Markazka Daraasaatka ee Muqdisho ayaa isna Maqaalkan ku eegaya waxyaabaha sababta u ah soo noqashada awoodda Mujaahidiinta Soomaaliya. Wuxuuna qoraalkiisa ku billaabay :
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa mudooyinkii dambe sii kordhisay weerarrada ay qaaddo, kadib markii ay fulisay silsilado howlgallo nowci ah, sida weerarkii magaalada Jannaale, halkaas oo horraantii bishan September ay dagaal kedis ah ku qaaday saldhig Meliteri oo ay lahaayeen Ciidamada Uganda ee hoos yimaada Ciidamada Amisom.
Howl-galkaas waxa uu sababay khasaare xooggan oo nafeed, iyadoo ay ku dhinteen inkabadan 80 Askari, ayna ku dhaawacmeen tiro boqol ka badan, sida ay sheegtay Xarakada Alshabaab, halka Amisom ay qiratay in 50 Askari looga dilay.
Dib usoo noqoshada awoodda Xarakada iyo kor u kicidda weerarrada ay fuliso waxay halis ku tahay Dowladda Fedraalka iyo Ciidamada Afrikaanka ee taageeraya, sababtoo ah waxay Xukuumaddu ku mashquulsantahay maamul goboleedyada iyo doorashooyinka la filayo in la qabto sanadka 2016-ka.
Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab waxay adeegsatay qaabab kala duwan, si ay u wajahdo cadowgeeda, waxaana ka mid ah :
1-Taak-tiigga dhigidda Kamiinada iyo Xarbu Cisaabaatka:
Xoogag ka tirsan Xarakada ayaa weerarro kala duwan waxay fuliyaan deegaanada ay maamulaan Ciidamada Dowladda iyo Ciidamada Afrikaanka ee gacanta siinaya. Weerarradan waxay sababeen in Ciidamada isbaheysanaya ay ka baxaan magaalooyin iyo deegaanno istaraatiiji ah oo kuyaalla gobollada Koonfurta, gaar ahaan meelo ka tirsan Gobolka Shabeellaha hoose.
2-Taak-tiigga Askareynta :
Duruufta xagga dhaqaale ee Ciidamada iyo Shaqaalaha Dowladda heysata aawadeed, waxay Xarakada Alshabaab ku guuleysatay inay dhex dusto Ciidamada, ayna adeegsato qaar iyaga ka tirsan, si ay ugu fududeeyaan howl-galladeeda. Askarta ay qorato waxay ka gacan siiyaan soo uruurinta Macluumaadka dhanka Sirdoonka, iyadoona badalkeeda lacago ku siisa howlaha ay qabtaan. Dhowr jeer oo is xig xiga ayay dagaalyahanno ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab u suura gashay inay ka gudbaan bar-kontoroolo aad u adag oo kuyaalla goobo xassaasi ah, sida Xarunta Madaxtooyada oo kale.
3-Taak-tiigga Howl-gallada Istish-haadiga :
Qaabkan dagaalkan waa nooca ugu dhiig daadashada badan weerarrada ay Xarakadu qaado, iyadoo uga gol leh inay saameyn nafsiyadeed ku keento Ciidamada Soomaalida iyo kuwa Afrikaanka, islamarkaana ku disho tiro badan oo Cadowgeeda ka tirsan.
Waxyaabaha Asbaabta u ah dib usoo noqoshada awoodda Xarakada :
Weerraradii ugu dambeeyay waxay keeneen in su’aalo badan la iska weydiiyo waxyaabaha sababta u ah dib usoo xoogeysiga howl-galladii Xarakada Alshabaab, xilli ay horey ugu baxday deegaanno badan oo kuyaalla Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Dadka sida dhow ula socda arrimaha Soomaaliya ayaa ku sababeeyay arrimaha soo socda :
1-Iyadoo ay luntay Macnawiyaatkii dagaal ee Ciidamada Soomaalida, wax mushaar ahna aysan qaadan muddo bilooyin ah.
2-Xiriirkii ka dhaxeeyay Dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo xumaaday, sida Puntland iyo Jubbaland, iyadoo Xukuumaddu ka mashquushay dagaalka ay kula jirtay Xarakada.
3-Iyadoo aysan diyaarsaneyn Ciidamo Soomaali ah oo xooggan oo howlahooda gudan kara.
4-Iyadoo ay adagtahay wada shaqeyn buuxda oo dhex marta Ciidamada Afrikaanka iyo kuwa Soomaalida, uuna meesha ka maqan yahay dowrkii wada shaqeynta istaraatiijiyadeed ee ka dhaxeeyay.
5-Taag darri heysata Sirdoonka Dowladda, iyadoo ay gabeen howshii loo xilsaaray.
6-Iyadoo aysan jirin xiriir wada shaqeyn oo ka dhaxeeya Ciidamada Dowladda dhexe iyo Ciidamada maamul goboleedyada dalka ka jira.
7-Xarakada oo wax ka badashay istaraatiijiyadda dagaalka.
8-Xarakada oo awood u yeelatay inay maamusho dagaalka, iyadoo weerarta goobta iyo goorta ay doonto, taas oo Ciidamada Afrikaanka iyo kuwa Soomaalida ka dhigtay kuwa difaac oo kaliya ku eg, halka Xarakaduna weerar tahay.
9- Xubno ka tirsan Xarakada oo ku dhex faafay Hey’adaha Dowladda, iyadoo Dowladdu ay awoodi weysay inay ka hortagto Cadowgeeda gudaha ku dhex jira, ka hor Cadowga dibadda.
W/Q : Maxamuud Cabdisamad Dul-Yadeyn.
FG : Erey bixinnada iyo Macluumaadka qaar ee Qoraagu sheegay ayaan Tifaftir ku sameynay.
W/T: Bahda AmiirNuur.com